Mkpọnwụ nke ime - ọgwụgwọ
N'ihi ihere, ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa mgbapụta, kwụsịrị ịrịọ onye ọkachamara. Àgwà dị otú ahụ dị njọ banyere ahụ ike nwere ike iduga na nhụsianya dị njọ, n'ihi na ọrịa ahụ akwụsịghị inwe ọganihu.
N'ezie, maka ọgwụgwọ nke ọnụọgụ ọbara dị n'ime ụlọ nwere ike iji mee ihe na ọgwụgwọ ndị mmadụ, ma ọ bụ naanị n'okpuru nlekọta nke ọkachamara. Jide n'aka na ị na-eme nchoputa na ụlọ ọgwụ, n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịlele oke ọrịa a n'adabereghị.
Nchoputa nke ọnodu ogugu di n'ime
Ọ bụ onye na-ahụ maka nchọpụta nke ọma nwere ike ịchọta nyocha ọhụụ dịka nyocha nke dijitalụ, yana ihe ndị nwere ike ime - anoscopy, iriscopy, colonoscopy ma ọ bụ sigmoidoscopy. Tupu nyocha ahụ, ị ​​ga-emerịrị enema .
Ụzọ nke ọgwụgwọ nke ọbara hemorrhoid
Dabere na ogbo nke ọrịa ahụ, usoro nlekọta ma ọ bụ usoro ịwa ahụ maka ọgwụgwọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-emeso ọrịa ahụ n'ụzọ dị mfe. Ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike, ọ bụghị mgbe niile ịwa ahụ, ma tinye ọgwụgwọ na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na enweghị ọrụ ya, a na-eme ọgwụgwọ. Ngwa ngwa egosiputa maka ọgwụgwọ na ụlọ ọgwụ bụ ọbara ọgbụgba ọbara ọbara, ọbara ọbara na-eme ka ọkpụkpụ, na ọnụnọ nke ịdaba n'ime oghere ahụ na ihe ize ndụ ha.
Ọgwụgwọ nke ala ala hemorrhoid
Dị ka n'oge ngbaghasị, na nhụsianya nke ọrịa ahụ, ọrụ dị mkpa na ọgwụgwọ bụ ọrụ nkịtị nke eriri afọ. Iji zere afọ ntachi, ịkwesịrị idozi nri, ebe dị mkpa na-egosi na ya na-eri ihe ọkụkụ, nke nwere ụba. Ọ bụrụ na nri adịghị ezu iji dozie ihe nchekwa ahụ, a na-enye ndị uwe ojii iwu. Okwesiri iburu n'uche na site na ọbara ọgbụgba na ị gaghị ejide saline laxatives.
Maka ọgwụgwọ nke ọbara hemorrhoid, dị iche iche ọgwụ ọjọọ eme ihe na-eji: suppositories, ointments, mbadamba. Ụlọ ọgwụ (Indomethacin, Relief, Anestezol) nwere ike imetụta hemorrhoid na akpụkpọ anụ mucous na nnukwu okpukpu. A na-eji ọgwụ ndị a eme ihe iji belata ihe mgbu na mbufụt. Ointments (Heparin, Troxevasin, Ichthyol) nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma nke mpaghara. Site na hemorrhoid afọ, a na-agbanye mmanụ mmanu na ọpụrụiche pụrụ iche. Ihe mbadamba nkume maka nchịkwa ọnụ (Detralex, Flebodia, Vasoket), bụ iji mee ka usoro mgbasa ọbara gbasaa ma wusi mgbidi nke arịa ọbara.
Ọgwụgwọ nke ọbara ọbara ọbara na ọbara ọgbụgba
N'okwu a, ọgwụgwọ mpaghara, nke mbụ, na-enye aka ịkwụsị ọbara ọgbụgba site na ọbara ọbara. Maka nke a, a na-eji kandụl hemostatic (Thrombin, Adrenaline), yana ọgwụ eji eme ihe (Vikasol, Hemoroidin). A na-egosi usoro ọgwụgwọ maka eriri ọbara dị n'ime ụlọ na ọbara ọgbụgba n'ọnọdụ ndị ahụ mgbe enwere ihe ize ndụ nke ịmepụta anaemia na ịdatị ala hemoglobin. N'iji ọbara dị oke egwu na-egbusi ike na hemoglobin, a na-arụ ọrụ ahụ ozugbo. Ụzọ ọzọ nke ịkwụsị ọbara ọgbụgba gụnyere ịbata n'ime ihe nkedo nke ngwọta sclerosing nke na-eme ka ọbara na-ejikọta ọnụ na ụfụ na-esote.
Taa, maka ọgwụgwọ nke ọnụọgụ anụ ahụ, n'ozuzu, jiri ntakịrị mkparịta ụka dị egwu:
Nbanye mkpuchi Latex;
nkwụsị nke akwara n'okpuru nchịkwa ultrasound, wdg.
Ọgwụgwọ nke esịtidem hemorrhoid site ndiife ịgba akwụkwọ
Site na ikikere nke dọkịta, ọgwụgwọ a na-agbanwe agbanwe nwere ike ịgbakwunye na ụzọ ndị mmadụ. Lee ụfọdụ n'ime ha.
Candles mere site na nduku nduku: kpochapu kandụl dị ka ihe nkedo ndị na-ekpochasị ihe na-esi na poteto a na-ekpo ọkụ, tinye ya na nsị n'abalị, tee ya mmanụ mmanụ.
Kandụl na-ekpuchi: mmiri nkịtị iji na-ehichapụkwa obere mkpịsị aka nke roba, itinye aka maka ihe mgbu na ịkwụsị ịmịnye ọbara, na-abanye n'ime ụzụ maka 1 ruo 2 nkeji.
Microclysters na ihe ọṅụṅụ bekee: 30 - 50 ml nke obere ihe ọkụ ọkụ na-agbanye n'ime oghere n'abalị.
Ọkpụkpụ myocardial - ọgwụgwọ
Exudative otitis mgbasa ozi
Bursitis nke nkwonkwo aka - ọgwụgwọ
Ihe coccyx na-ewute - ihe niile na-akpata na usoro ọgwụgwọ
Ihe na-akpatara ụmụ nwanyị
Ogbu ogbu na nkwonkwo nke oma - Mgbaàmà na Ọgwụgwọ
Mmanya nke akwara
Igbu mmiri maka igwu mmiri na diopters
Spanish newt - ọdịnaya na akwarium
Nkịtị Wall Provence
34 ihe ndi oka di iche iche
Achicha na plums
Kedu ihe nri nri?
Gwen Stefani kpọrọ Blake Shelton aka na obi ya
Ugwu ala - uru bara uru nke Jerusalem atịchok, peculiarities nke na-eto eto
Kedu ihe ị ga-eyi uwe-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Akpa Banana 2013
Foto ndị dị na 9 Ka Ụbọchị Mmeri maka Ụmụaka (na nkebi)
Mmetụta nkuzi microblueing
Ọnụ na-eme emerald
Ọrịa Raynaud - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Kedu calorie ole na mkpụrụ pọmigranet?
Kedu ka ị ga-esi tụfuo mgbe ezumike gị gasịrị?
Esi esi esi esi anu ulo ezi?
Nke kacha mma kabeeji iche